Gonzalo Higuain oo dhiirigeliyay Cristiano Ronaldo kahor kulanka soo socda ee kooxda Juventus – Gool FM
Gonzalo Higuain oo dhiirigeliyay Cristiano Ronaldo kahor kulanka soo socda ee kooxda Juventus
(Turin) 27 Sebt 2019. Waxaan dhihi karnaa in Cristiano Ronaldo uu yahay mid ka mid ah ciyaartooyda ugu fiican adduunka waqtigan la joogo, waxaana ku wehliya Lionel Messi, isla markaana isbar-bar dhiga ka dhexeeya wuxuu sii jiri abid.
Laakiin kuwa ka garab ciyaaray Cristiano Ronaldo ayaa aad ugu garanaya sida uu u yahay qof aadane ah iyo waxa ka dambeeya ifafaalahiisa, waxaana shaqsiyaadkaas ka mid ah Gonzalo Higuain oo Ranaldo ay isaga garab ciyaareen kooxaha Real Madrid iyo Juventus.
Gonzalo Higuain ayaa wareysi uu siiyay shabakada “Fox Sports” wuxuu kaga hadlay Cristiano Ronaldo wuxuuna yiri:
“Waxaan si wadajir ugu soo ciyaarnay kooxda Real Madrid, sannado badan ayaa ka soo wareegatay, hadda waxaan helay ciyaaryahan gabi ahaanba ka duwan sidii hore, oo ah xiddig aad iyo aad u wanaagsan ee qoys leh”.
“Waxaan ku raaxeystay inaan kasoo garab ciyaaray, waan faraxsanahay sababtoo ah markale ayaan ku soo laabanay inaan si wada jir ah ugu ciyaarno xilligan la joogo kooxda Juventus”.
Si kastaba ha noqotee, kooxda Juventus ayaa ku wajihi doonta berrito garoonka Allianz Stadium ee magaalada Turin, kooxda SPAL, si ay u wada ciyaaraan kulankooda lixaad ee horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga.
Tababare Solskjær oo ka warbixiyay xaaladda dhaawac ee xiddigaha kooxdiisa kahor kulanka Arsenal